सुचना प्रविधि विधेयकः राष्ट्रिय आवश्यकता की प्रविधि माथि अंकुश ? – Sudeep Paudel
सुदिप पौडेल ( Published on Living With ICT Falgun edition)
सुचना प्रविधिको विकास र प्रर्वद्धन गर्ने उदेश्यले नेपाल सरकारद्धारा सुचना प्रविधि विधेयक संघिय संसदमा यहि फागुन १० गते दर्ता गराएको छ । यस विधेयकलाई लिएर थुप्रै टिका टिप्पणी भईरहेका छन् । विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्दा नै प्रतिपक्ष दलका नेता गगन थापाले यस विधेयको आवश्यकता माथि नै प्रश्न खडा गरेका छन् । के यो विधेयक साँच्चै नै हावादारी र अनावश्यक छ त ? यसै विषयमा एक सुचना प्रविधिको विध्यार्थीको हेसियतले सो विधेयकमा समेटिएका विभिन्न महत्वपुर्ण विषय र उल्लेख नगरिएका आवश्यक विषयहरुको चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु । सुचना प्रविधिको तिव्र विकास संगै सो सम्वन्धि प्रयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उत्तिकै महत्वपुर्ण र आवश्यक पनि थियो । ढिलै भए पनि सुचना प्रविधिका कतिपय विषयहरु कानुनी दायरा अन्र्तगत समावेश भएकोमा यो विधेयक स्वागतयोग्य नै छ । सुचना प्रविधिको तिव्र, विश्वव्यापी विकास र सो अनुसार कानुनी तयारीका निम्ति यो विधेयक एक राष्ट्यि आवश्यकता पनि हो । तर भविष्यको सम्भावित विकासहरुलाई मध्य नजर गरि यस विधेयकले थप कतिपय विषयहरु अझै समेट्न सकेको भए, यो विधेयक थप प्रभावकारी हुने थियो । खैर नहुनु भन्दा हुनुनै वेश भनेझैँ यसलाई सकारात्मक नै लिनुपर्छ ।